5 ka mid ah ololaha xayaysiisyada ugu wanaagsan | Hal-abuurka khadka tooska ah
5 ka mid ah ololaha xayaysiisyada ugu fiican
Madadaalada iyo xiisaha macaamiisha ayaa ah waxa inta badan ololaha xayaysiisyada ay rabaan inay gaaraan, sababtoo ah haddii ay tan gaaraan, waxaa jiri doona fursad aad u weyn oo olole lagu guuleysto. Laakin waxa run ahaantii muhiimka ah waa in ololuhu uu ku sii jiro xusuusta macaamilka, sababtoo ah waxay ina ogeysiin doontaa inay saameyn wanaagsan ku yeelatay isaga.
Sababtan awgeed, maqaalkan waxaan ku uruurineynaa 5 ka mid ah ololaha xayaysiisyada ugu fiican taas oo hubaal ah in aad xasuusato muddo dheer.
1 5 ka mid ah ololaha xayaysiisyada ugu fiican
1.1 Dove: Quruxda dhabta ah
1.2 Volkswagen: "Ka fikir wax yar"
1.3 Tareenka Melbourne: Siyaabaha nacasnimada ah ee loo dhinto
1.4 Heineken: "Dhammaantiin waad mahadsan tihiin"
Inta aan ku tusin tusaalayaasha aan soo xulnay, waxaan dhihi karnaa doorashadan waxay ku saleysneyd saameynta ay keeneen ololahan, maadaama ay qaarkood yihiin. waxaa lagu abaalmariyay kuwii ugu fiicnaa taariikhda, qaar kale waxay jebiyeen fikrado qaldan iyo halbeegyada bulshada iyo kuwa kale waxay jabiyeen rikoorada adduunka..
Halkan waxaan ku eegaynaa 5 ka mid ah kuwa ugu fiican. ololeyaal xayeysiin ah abuuray ilaa maanta.
Dove: Quruxda dhabta ah
Aragtidu waa dhismayaal bulsho, taas oo ah, ay abuurto bulshadu, si la mid ah sida loo abuuri karo, waa la tirtiri karaa, inkastoo ay u baahan yihiin dadaal dheeraad ah. Iyaga daraaddood waxaa soo ifbaxaya qulqulo doonaya in ay jebiyaan fikrado la aaminsan yahay oo ay dadwaynaha soo jiitaan, inta badana adeegsada dood qiiro leh. Waxa dhabta ah ee muhiimka ah nooca hadda jira waa daaweynta aadka u kala duwan ee ay siiyaan haweenka. Fikradda quruxda dhaqameed iyo quruxda ku habboon ayaa isbeddelaysa waana xadgudub. Xaaladahan, waa dumarka oo leh cod iyo cod ku leh go'aanadooda, waxay isu muujiyaan inay yihiin "aan qummanayn" oo aan raali ka ahayn.. Waxay ka fogaadaan inay guusha haweenka ku xidhiidhiyaan muuqaalkooda jireed, sidaas darteed waxay soo bandhigayaan tusaale u ah haweeneyda guusha leh oo madaxbannaan.
Ogeysiisyadani waxay ka tarjumayaan tusaale cad oo ku saabsan horumarka raadinta sinaanta jinsiga. Dove waa mid ka mid ah calaamadaha hormoodka ah ee isticmaalka kheyraadkan, difaacayaasha aaminka ah ee kala duwanaanta, waxay muujiyaan haween dhab ah oo xooggan. Tan iyo markii la bilaabay astaantooda 1957, waxay la shaqeeyeen haween badan oo kala duwan, labadaba si ay u sheegaan sheekadooda iyo iibinta alaabadooda iyo qaabka aan u aragno quruxda dhabta ah. Tusaale ahaan tan waxay ahayd 2004 markii ay bilaabeen ololaha quruxda dhabta ah. Dhaqdhaqaaqa kacaanka ee warshadaha wakhtigaas, waxay soo bandhigeen haween burburiyay fikradaha quruxda. Ujeedadiisu waxay ahayd in uu kor u qaado isku kalsoonida haweenka isaga oo muujinaya sawirro aan la daabicin oo kalsooni ku qaba naftooda iyo quruxdooda dabiiciga ah.
Volkswagen: "Ka fikir wax yar"
Shan iyo toban sano ka dib dagaalkii labaad ee aduunka, Maraykanka oo ka mid ah quwadaha aduunka ugu waa wayn ayaa noqday wadan wax iibsada. Markaa waxa ay bilaabeen in ay u dhisaan baabuurta qoysaska leh ilmaha kor u qaada. Ololahani wuxuu ahaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee astaanta baabuurta Volkswagen. Qoraalka ololaha waxaa sameeyay 1959 Julian Koening oo ka tirsan wakaaladda Doyle Dane Bernbach. Ololahani wuxuu nagu martiqaaday inaan ka fikirno baabuurka inuu yahay gaadiid, ee ma aha inuu yahay shay xaalad. CIyada oo ujeedadu tahay horumarinta moodelka cusub ee Volkswagen Beetle, baabuur is haysta. Gambaleelka waxay ahayd guushan oo kale in ay ka caawisay in Beetle uu noqdo mid guul ganacsi ah.
Waqtigaas, xayeysiisyada baabuurtu waxay aad diiradda u saareen bixinta macluumaadka ugu badan ee suurtogalka ah ee alaabta halkii ay ku qancin lahaayeen macaamilka si ay u iibsadaan. Intaa waxaa dheer, waxay lahaayeen hab aad diiradda u saaraya khiyaali marka loo eego xaqiiqada.
Tareenka Melbourne: Siyaabaha nacasnimada ah ee loo dhinto
Waxaa loo turjumay Ingiriisi sida "Dhibaatooyinka loo dhinto", waxay ahayd olole xayaysiis ah oo ay samaysay wakaaladda McCann Melbourne. Waxaa loo sameeyay tareenada metro, shabakada gaadiidka tareenada ee Melbourne (Australia). Ujeedada ololahan ayaa ahayd in kor loo qaado badbaadada dadka u soo dhawaaday dariiqyada tareenka. Ololahani waxa uu ku dhamaaday guul caalami ah, iyada oo ay ugu wacan tahay muuqaalkeeda muusiga. Waxay hadda haysataa 228 milyan oo daawashada Youtube. Jilayaasha muuqaalka ah ee muuqaalka ku jira waxay matalayeen siyaabo nacasnimo ah oo loo dhinto sida ilaalinta mas rattlesnake xayawaanka rabaayada ah, istaagida cidhifka boosteejada tareenka, ama ka gudubka wadooyinka tareenada si aad u bedesho sagxadaha halkii aad ka isticmaali lahayd jaranjarooyinka.
Ololahani wuxuu diiradda saaray wargeysyada, raadiyaha, xayaysiinta dibadda, iyo shabakadaha bulshada. Iyada waxa ay rabeen in ay indhaha dadweynaha ku soo jeediyaan in ilaa wakhtigaas aanay danaynayn ololaha nabadgelyada waddooyinka.
Heineken: "Dhammaantiin waad mahadsan tihiin"
Ololahan waxaa hagayay Megaforce waxaana soo saartay Iconoclast Paris. Iyada oo goobtan ganacsi, Heineken, waxay rabeen inay ka tagto nacaybka ku saabsan doorashada badeecadeeda, sababtoo ah ma kala soocaan oo uma doodaan in macaamiil kastaa doorto. Tani, waxay rabaan inay gudbiyaan in isticmaalka biirkooda caanka ah uusan kala soocin jinsiga ama fikradaha khaldan.
Fiidiyowga waxaad arki kartaa xaalado kala duwan, kuwaas oo mudalabyadu ugu adeegaan haweenka si khaldan, sababtoo ah waa kuwa dalbaday biirka. Heineken waxa ay doonaysaa in ay jebiso fikradaha qaldan. Sida dumarku u heli karaan biirka, ragguna waxay yeelan karaan cocktail. Heineken u heellanaanta xorriyadda doorashada qof kasta, oo ma aha in ay sabab u tahay sawirka ay bulshadu ka haysato waxa ay tahay in ay qaataan marka loo eego lab iyo dheddig ama fikradooda.
Xigasho: Red Bull
Red Bull Stratos es una xeradaa.a dadweynahaitaria LanzADA en el 2010 by la emphagardaamo de bedalabas tamartaéiwmas Red Bull. Ololuhu waxa uu doonayey in uu kor u qaado boodboodka stratospheric ee Felix Baumgartner, qusida el 14 de octubre de 2012 se beddeloxanaaqió en el asaasiga ah Ser aadanahao en dhabta ahizar un SALilaa oo ka mid ahde una hooseura de 39 kilókulmayros. La xeradaa.a fue un éxIto en términos de dadweynahatay, ya in BaumgardNeer se beddeloxanaaqió en una dabaaldegtay mundaril y el SALilaa fue dhashiisikhaldan by ka medmacruufka de comunicacion de ilaado el mundaro.
Ololaha loogu talagalay in lagu muujiyo in sheyga Red Bull uu hagaajiyo waxqabadka jidhka iyo maskaxda. Ololahani waxa uu u suurtagashay in uu noqdo mid ka mid ah ololaha suuq-geyneed ee ugu wanaagsan taariikhda, iyo sidoo kale abuurista mid ka mid ah dhacdooyinka ciyaaraha ee ugu weyn 2012.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » 5 ka mid ah ololaha xayaysiisyada ugu fiican
Qaababka WordPress ee bilaashka ah
Isku dhafka hal sawir iyo mid kale oo ku jira Photoshop